Ukuthinteka kweMiddle East ngo-Obama - Bayede News
Ukuthinteka kweMiddle East ngo-Obama
Ukuphuma kuka-Obama akuzona izindaba ezinhle kwelase-Middle East
UMENGAMELI u-Obama obesolwa ngokuba nguMengameli wokuqala wase-USA ongezwelani ne-Israel sesimphelele isikhathi eWhite House. UMengameli u-Obama obenguMengameli wokuqala omnyama e-USA usephelelwe yisikhathi esigunyazwa ngumthethosisekelo ukuthi akwazi ukuqhubeka nokusiqhoqhobala lesi sikhundla.
Yize noma uHlumeni ka-Obama ubusolwa ngokuthanda ukugxambukela ezindaabeni zamanye amazwe ushiye izinto zimapeketwane. Kodwa okunakekayo ukuthi ubufisa ukulungisa izinto nezitha zabo ezadalwa ohulumeni baphambilini. I-USA ne-Iran bayizitha zakudala kusukela eminyakeni engaphezu kwamashumi amane edlule.
I-USA yaqala ukuba nexhwala nge-Iran ngonyaka wezi-1979 lapho abahlali bakhona balandela umholi wabo u-Imam Khomeini ekulwisaneni kwakhe nohulumeni ayewusola ngokubukela phansi inkolo yobu- Islam ekubeni cishe bonke abahlali bakhona bekholelwa kuyo. Ngokuthi inkosi yase-Iran yangaleso sikhathi, ogama layo kunguMohammad Shah yayinobudlelwano obukhulu ne-USA, kwabe sekuba khona ukungahoshelani phakathi kwe-Iran ne-USA emva kokuketulwa kwayo.
Obesekubaxabanisa kakhulu kule minyaka engamashumi amathathu edlule, ukuthi i-Iran yaqala umsebenzi wokwakha ugesi osebenza ngamandla enuzi. Ngokutetema kwe-Israel eyakhala e-USA ukuthi i-Iran yenza lo msebenzi nje yingoba ihlose ukubhubhisa yona, yabe i-USA isiqala umkhankaso wonswinyo lwezimali olubhekiswe e-Iran obese luhlale iminyaka engamashumi amathathu ngaphambi kokuthi kufinyelelwe esivumelwaneni esithize kulo nyaka. I-USA icheme kakhulu ne-Israel kwelaseMiddle East okuyikhaya lesizwe sama-Arab. Kunombango owaqala eminyakeni engaphezu kwamashumi ayisithupha edlule phakathi kwe-Israel nePalestine.
Elakwa-Israel ladla umhlaba wabasePalestine okwadala ukuthathwa kwezikhali nalapho abahlulwa khona abasePalestine. Obesekumbangela isigcwagcwa uMengameli Obama ukuthi wayalela i-Israel ukuthi ayibuyele emhlabeni wayo eyayikuwo ngonyaka wezi-1967 ngaphambi kwempi. Lokhu kwathusa abaningi njengoba kwaziwa kahle ukuthi i-USA ne-Israel abakaze baphikisana. Khona manjalo i-Israel iyaqhubeka nokudla umhlaba wasePalestine esigcemeni saseWest Bank. UMengameli u-Obama wakubeka obala ukuthi akahambisani nalokhu, okwadala ukuphonsana ngamazwi noyinhloko kahulumeni wase-Israel u-Benjamin Netanyahu.
Odabeni lwase Syria uMengameli u-Obama yize waqala wahola umkhankaso wokuthi akuketulwe ngenkani uMengameli u-Bashar Al-assad, useshintshile manje emva kokugxekwa okukhulu. Usesebenzisana nohulumeni waseSyria ukulwisana nezidlamlimo ezilibusayo leliya zwe elake laziwa ngokuthula. Abagaqele esobuMengameli e-USA bakhuluma ulimi olwehlukile ku- Obama, okungazona izindaba ezinhle kwabase Middle East. Yize amazwi ka-Obama ayengenamthelela otheni kodwa kwakunikeza ithemba kwabakulezi zindawo ezikhungethwe izinkinga. Odabeni lwesivumelwano sokuhoxisa unswinyo lwezimali olubhekiswe kwelase-Iran, bobabili abagaqele esobuMengameli bakhuluma ulimi olungase lubuyisele izinto emuva. Unkosikazi uClinton yena uthi ngeke aluhoxisa unswinyo oluthinta izwe lakhe ne-Iran kodwa ngeke akhuthaza amazwe ase-Europe ukuthi abuyisele ubudlelwano obuhle naleliya zwe. Uphinda anqabe aphethe ukudedela izizumbulu zase-Iran ezibanjwe e-USA. Umhlonishwa u-Trump yena uthi angasihlakaza lesi sivumelwano se-USA ne-Iran. Izizathu zakhe uthi ukuthi yingoba i-Israel ayihambisani nalesi sivumelwano.
I-Israel ayifihlile ukuthi ayihambisani nokuthelelana amanzi ne-Iran kanti yaveza nokuphoxeka ngobuholi buka-Obama ekwehlulekeni ukusivimba lesi sinqumo. UMhlonishwa u-Trump uthi okufunwa i-israel uyokulandela. Odabeni lwaseSyria, unkosikazi uClinton usekhulume okuningi okuphikisanayo ngalolu daba, kodwa agcine ukukusho ukuthi ngeke asebenzisana neRussia ekulweni nezidlamlilo kodwa uyoqhubeka axhase amavukelambuso alwa nobuholi buka-Assad. UMhlonishwa u-Trump yena unikeza ithemba kwabaseSyria ngokuveza ukuthi uyosebenzisana neRussia, uma kungenjalo uyohlehlela emuva ayeke iRussia neSyria balwe nalezi zidlamlilo. Angeke wathembela-ke ezwini likankosikazi uClinton noMhlonishwa uTrump ngoba balokhu beguquguquke njalo. Okusobala ngabazongena ezicathulweni zikaMhlonishwa u-Obama ukuthi akuzukuba nokuthula eMiddle East.
Abafihlile ukuthi bacheme nabakwa-Israel ekuqhubekeni nokuthatha umhlaba wabasePalestine nokumincisa i-Iran. Unkosikazi uClinton oweseka isinqumo sokuhlasela elase-Afghanistan naseLibya akazisoli futhi akazimisele nakancane ukulungisa amaphutha ezwe lakhe kwelase Middle East. Okwethusayo ukuthi wake waveza ukuthi angawathumela amasosha akhe kwelaseSyria ayobhubhisa u- Assad, yize lesi senzo singasho ukuthi bazobhekana ngqo nelaseRussia okungase kususe enkulu impi le, u-Obama akade eyibalekela. UMhlonishwa uTrump oqale ngonyaka odlule ukuba ngusopolitiki, usaqhubeka nokubukela phansi isizwe sama-Arab njengoba ethi nanoba ubani uhlukumeza i-Israel uyobhekana namasosha kahulumeni wakhe yize labo bayobe belwela umhlaba wabo.
Iqiniso ukuthi akekho ongcono phakathi kwabo. Abantu baseMiddle East basazoqhubeka nokobulawelwa umhlaba wabo, okusho ukuthi basazoqhubeka nokusabalala zonke izinkalo befuna amadlelo angcono.
Bayede News Nov 7, 2016